Laura Swanson Maqaallo ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Laura Swanson
U jaangooynta khibrada dukaameysiga macaamiisha shaqsiyadeed maahan fikrad cusub. Kaliya ka fikir dareenka aad heleyso markii aad booqato makhaayad maxalli ah oo ay adeegto xasuusato magacaaga iyo tan caadiga ah. Waxay dareemeysaa wanaag, sax? Shakhsiyeyn shakhsi ahaaneed waxay ku saabsan tahay dib u sameynta taabashadaas shakhsi ahaaneed, oo u muujisa macmiilka inaad fahamsan tahay oo aad daryeesho iyada. Teknolojiyada ayaa laga yaabaa inay awood u siiso xeeladaha shakhsi ahaaneed, laakiin shakhsi ahaanshaha dhabta ahi waa istiraatiijiyad iyo maskax ka muuqata is-dhexgal kasta oo macaamiil ah